Dugsiyada Tuli Guuleed ee ku dumay dagaalada Oramada oo aan weli la dayactirin – Radio Daljir - Idman News
Dugsiyada Tuli Guuleed ee ku dumay dagaalada Oramada oo aan weli la dayactirin – Radio Daljir
Waxaa guud ahaan dalka Itoobiya iyo Dowlad Deegaanka Soomaalida si toos ah uga bilaabmay sannad-dugsiyeedkii waxbarashada ardeyda ee 2019-2020.
Saas oo ay waxbarashadu dalka uga bilaabatay baan haddana tuulooyin badan oo hoosyimaada degmada Tuli Guuleed ee gobolka Faafan ayaan weli wax dayactir lagu sameynin. Dugsiyada waxbarashada ee deegaanka ayaa dagaalada Oromadu aafeeyeen, qaarkoodna kuba burbureen.
Ardeyda degmada Tuli Guuleed ayaan muddo laba sannadood ah helin wax waxbarasho ah, waxaana waxbarasho la’aantaas sababay dagaalo ay maleeshiyaad qowmiyadda Oromadu si joogto ah ula beegsadaan deegaanada Soomaalida, siiba Tuli Guuleed iyo deegaanada hoosyimaada.
Ardeyda Tuli Guuleed ayaa sannad dugsiyeedkaan waxa ay Dowladda Federaalka iyo xukuumada Dowlad Deegaanka Soomaalida ee Jigjiga u direen baaq ay ku codsanayaan in dib loo dayactiro goobaha waxbarasho ee deegaanka Tuli Guuleed.
Police Detain The Director Of Universal Television In Hargeisa
Mogadishu Journal » Guddoonka Labada Aqal oo kulan yeeshay
Munaasabadda caleemo saarka Axmed Madoobe oo Kismaayo ka socota
Previous Previous post: Barnaamijka Galab Wanaagsan (09-10-2019) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Next Next post: Shirkado Maalgashanaya Puntland oo Garoowe soo gaaray (dhegayso) – Radio Daljir